४.९९ अंकले परिसचूक बढ्दा ८२ करोडको शेयर कारोबार | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर ४.९९ अंकले परिसचूक बढ्दा ८२ करोडको शेयर कारोबार
on: April 18, 2019 मुख्य खबर, लगानी
४.९९ अंकले परिसचूक बढ्दा ८२ करोडको शेयर कारोबार
नेप्से सुधारिएपछि ब्रोकरमा लगानीकर्ताको चहलपहल बढ्यो
वैशाख ४, काठमाडौं (अस) । बुधवार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक ४ दशमलव ९९ अंकले बढेर १ हजार २१७ दशमलव शून्य ४ विन्दुमा पुगेको छ ।
१ हजार २१२ दशमलव २२ विन्दुबाट शुरू भएको परिसूचक २२ मिनेटमा १ हजार २२० दशमलव १५ विन्दुसम्म पुगेको थियो । ४५ मिनेटमा बजार यस दिनकै न्यून १ हजार २१० दशमलव ३९ विन्दुमा ओर्लिएको हो । सो विन्दुपछि बढेको परिसूचक सवा एक घण्टामा यस दिनको उच्च १ हजार २२३ दशमलव ४९ विन्दुसम्म पुगेको थियो । दिनभरि उतारचढावमा रहेको परिसूचक अन्त्यमा शून्य दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेर बजार बन्द भएको छ । १० समूहको परिसूचकमा बैंकिङ र जीवन बीमा समूहको परिसूचक बाँकी समूहकोभन्दा बढीले बढेपछि परिसूचक उकालो लाग्न सहयोग पुगेको हो । ६ समूहको परिसूचक भने १ प्रतिशतभन्दा कमले घट्न पुगेको छ ।
वैशाख लागेसँगै शेयर बजार पनि बढ्न थालेको छ । तेस्रो त्रैमासको विवरण नाफामूलक देखिनुका साथै बजार बढ्न थालेपछि ब्रोकरमा लगानीकर्ताहरु चहलपहल पनि बढ्न थालेको छ ।
यस दिन रू. ८२ करोड १६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम रू. ७ करोड ८९ लाख बढेको हो । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स १ दशमलव ३२ अंकले बढेर २ सय ६१ दशमलव ५७ विन्दुमा पुगेको छ ।
सिभिल लघुवित्तको शेयर मूल्य बढ्दा कर्पोरेट डेभलपमेण्टको मूल्य आईपीओभन्दा तल
यस दिनको कारोबारमा सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य रू. ३४ ले बढेर प्रतिकित्ता रू. ६२५ मा कारोबार भएको छ । कारोबार भएदेखि लगातार घटिरहेको युनिभर्सल पावर कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिकित्ता रू. ५ ले बढेर प्रतिकित्ता रू. ९५ मा कारोबार भएको छ । कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्य रू. ४ ले घटेर प्रतिकित्ता ९४ मा कारोबार भएको छ । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य रू. ८४ ले घट्दा प्रतिकित्ता रू. २ हजार ९६ मा कारोबार भएको छ ।
कारोबार भएका १७१ कम्पनीमा ७८ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ७३ कम्पनीको शेयर मूल्य घट्न पुगेको छ । साथै, २० कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ ।
सर्वाधिक शेयर कारोबार हुनेमा १० वाणिज्य बैंक, कसको कति कारोबार ?
बुधवार सर्वाधिक कारोबार हुने १० कम्पनीमा १० ओटै वाणिज्य बैंक परेका छन् । सर्वाधिक कारोबार हुनेमा एनएमबि बैंक लिमिटेडको प्रतिकित्ता रू. ३८९ मा रू. ७ करोड २६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । दोस्रोमा एनआईसी एशिया बैंकको प्रतिकित्ता रू. ४८७ मा रू. ४ करोड ५४ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । उच्च कारोबार हुने १० कम्पनीमा रू. २ करोड २५ लाखदेखि ७ करोड २६ लाखसम्मको शेयर कारोबार भएको छ ।